अब घरको भित्तामै बगैचा तयार गर्नुस ! – NewsAgro.com
December 17, 2017 newsagro0Comments अब घरको भित्तामै बगैचा तयार गर्नुस, इंग्लिस आईबी, क्रिसमस क्याक्टस, पोठोस, फिशबोन क्याक्टस, फूल, बेगोनिया र जिरेनियम, बोस्टन फर्न, स्पाइडर प्लान्ट, हरियाली बगैँचा
यो समाचार 744 पटक पढिएको
काठमाडौं । घर वरिपरीको वातावरण सुन्दर बनाउन हरियाली बगैँचा निर्माण गर्ने कसको पो रहर नहुँदो हो र ? तर जग्गाको अभाव, त्यसमा सुनभन्दा महँगो सहरको जमिनको कारण बगैँचा सबैको रहरमै सीमित हुनसक्छ। तर अब तपाईको रहर, सोख र सपना जग्गाको अभावले रोक्नुपर्ने छैन। त्यसको लागि तपाईसँग इच्छा मात्र भए पुग्छ।
घरबाहेक अन्य खाली जमिन नभए पनि घरको बालकोनी, खाली भित्तालाई नै तपाई गार्डेन बनाउन सक्नुहुने छ, अर्थात ह्यांगिङ गार्डेन। विकसित देशमा निकै प्रचलनमा रहेको र भविष्यको ट्रेडिङ शैलीको रुपमा लिइएको यो प्रविधिमार्फत नेपालमा पनि बगैँचा निर्माण गर्न सकिने भएको छ।
घरको भित्ता, वाल अथवा कुनै पनि ठाउँमा बास्केट झुन्ड्याएर फूल, विरुवा तथा स–साना रुख रोपेर सुन्दर बगैँचा निर्माण गरिने भएकोले यसलाई ह्यांगिङ गार्डेन भनिएको हो।
ठाउँको छनौट, विरुवाको निर्धारणअनुसार यस्तो गार्डेनले घरको सुन्दरतालाई अझै बढाउने र ठाउँ अभावले बगैँचाको रहर अपुरो नहुने बताउँछन् किसान एग्रो मार्टका संचालक तथा कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटा।
ह्याङगिङ बगैँचा बनाउनको लागि ठाउँको छनौट महत्वपूर्ण हुने देवकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार ताप, हावा तथा चिसो सिधै पर्ने ठाउँ उपयुक्त हुँदैन। हल्का छायाँ पर्ने बाल्कोनी छेउको भित्ता, झ्यालतिरको भागजस्ता ठाउँ उपयुक्त हुने उनले बताए। घरको चारैतिर र मुख्य ढोकामा ह्यागिङ बास्केट घरको मुख्य ढोकाको दुबैतिर ह्यागिङ बास्केट राखेर बरण्डाको तीन तिरै ह्यागिङ बास्केट बगैँचा निर्माण गर्न सकिने देवकोटाको भनाइ छ।
त्यस्तै सेमी टेरेस, झ्याल र बालकोनीमा बास्केट राखेर फूल तथा विरुवा हुर्काउन सकिन्छ। यस्तो बगैँचा निर्माण गर्दा जस्तो पायो त्यस्तै विरुवा तथा फूल रोप्दा झनै कुरुप हुनसक्ने देवकोटाको भनाइ छ। यसका लागि उपयुक्त विरुवाहरु रोप्नुपर्ने उनले बताए।
बोस्टन फर्न, पोठोस, स्पाइडर प्लान्ट, इंग्लिस आईबी, क्रिसमस क्याक्टस, फिशबोन क्याक्टस, बेगोनिया र जिरेनियमजस्ता विरुवा उपयुक्त हुने देवकोटाको सुझाव छ।
यस्तो बगैँचाको लागि बजारमा विभिन्न प्रकारका बास्केटहरु उपलब्ध हुन्छन्। घरलाई सुहाउँदो निश्चित उचाई, अकार भएका बास्केट रोज्नुपर्नेमा देवकोटाको जोड छ। कतिपय बास्केटमा पहिले नै माटो, कोको फाइबरजस्ता तत्व फिट गरिएकाले घरमा ल्याएर झुन्डाए मात्र पनि हुन्छ।
यस्तो बगैँचा कसैले बनाउन चाहेमा प्राविधिक सल्लादेखि निर्माणको लागि आवश्यक सबै सामग्री किसान एग्रो मार्ट नयाँ बानेश्वरमा उपलब्ध हुने देवकोटाले जानकारी दिए।
← स्थानीय जातका भैँसी लोप हुँदै
किसानमा हाइटेक तरकारी खेतीको आकर्षण बढ्यो →
उन्नत जात र प्रविधिले माछा उत्पादन बढ्यो